Mitemo yeSpamming: Kufananidza kweUS, UK, CA, DE, uye AU | Martech Zone
Sezvo hupfumi hwepasi rose hwave hwechokwadi, zvibvumirano zviri kusainwa zvinovimbisa kuti nyika yega yega haingoremekedze chete mitemo yeumwe - vanogona kutokwanisa kutora matanho ekuranga kumakambani anotyora mitemo iyoyo. Imwe nharaunda yekutarisa kune chero kambani irikutumira email pasirese ndeyekunzwisisa nuances yenyika yega yega sezvo ichireva email ne spam.
Kana iwe uchida kuongorora yako yekuisa inbox uye mukurumbira pasirese, ive shuwa yekusaina 250ok. Ivo vane yepasi rose ISP kufukidzwa pamhinduro dzavo uye vanozoongorora yako kutumira IPs kupesana nerunyorwa.
Iyo yakajairwa tambo munyika dzese ndeyekuona kuti iwe unorekodha kuti vanyori vako vakapinda sei-mukati, kwavakasarudza-mukati, uye nekuenderera mberi nekuchengeta yakachena email rondedzero - kuchenesa yakadonhedzwa uye isingapindure maemail kubva ku data rako. Iyo infographic inosimbisa:
United States (US) INOGONA-SPAM - usashandise nhema kana kutsausa musoro musoro ruzivo, usashandise inonyengera misoro yenyaya, udza vanogamuchira kwaunowanikwa, udza vanogamuchira nzira yekubuda mukugamuchira email yemberi uye kukudza kubuda-zvikumbiro nekukasira. Mamwe mashoko: UNOGONA-SPAM
Canada (CA) CASL - tumira chete kumvumo-based email kero, dudza zita rako, doma bhizinesi rako, uye upe humbowo hwekusaina kana ukakumbirwa. Mamwe mashoko: CASL
United Kingdom (UK) EC Directive 2003 - usatumire kushambadzira kwakananga pasina mvumo kunze kwekunge paine hukama hwakatangwa kare. Mamwe mashoko: EC Directive 2003
Australia (AU) Spam Mutemo 2003 - usatumire email isina kukumbirwa, sanganisira unoshanda usazvinyora mumaemail ese, uye usashandise software-yekukohwa software. Mamwe Info: Spam Mutemo 2003
Germany (DE) Federal Dziviriro Dhata Mutemo - usatumire email yausina kukumbira, unofanirwa kunge uine mvumo. Usavanze chitupa, uye ipa kero chaiyo yezvikumbiro zvekubuda, uye upe humbowo hwekunyoresa kana ukabvunzwa. Mamwe mashoko: Federal Dziviriro Dhata Mutemo
The European Union Directive pamusoro pekuvanzika inoshandawo kunhengo dzese dzeEU. Sekureva kweEuropean Union Directive pamusoro peKuvanzika, unofanirwa kunge uine mvumo yakajeka usati watumira chero email yekutengesa, sarudzo yekubvisa kana kuzvinyoresa inofanira kunge iri nyore uye yakajeka kune vanogamuchira mameseji ekutengeserana, uye unofanirwa kutevedzera mimwe mitemo yenyika. .
ichi infographic kubva kuVertical Response inosimbisa misiyano yakakosha yemitemo spam kubva kunyika dziri kuNorth America neEurope.
Tags: australia spam chiitoaustralia spam chiito 2003can-spamCanada spam mutemocaslec kuraira 2003europe mitemo spameuropean union rairo pane zvakavanzikagermany federal data kuchengetedza chiitogermany spam mutemospamspam mutemospamming mutemouk spam mutemounited kingdom spam mutemo